Uvavanyo lwezonyango imbali yeiglavu
Uviwo lwethu lwezonyango umgca wemveliso yeglavu uyamkela itekhnoloji ye-CNC ezenzekelayo, ephucula kakhulu inqanaba lokuzenzekelayo, iphucula ukusebenza kwemveliso, inciphisa ukusetyenziswa kwemanyuwali, iphucula ukusetyenziswa kobushushu, inciphisa ukusetyenziswa kwamandla, ikhusela okusingqongileyo, kwaye iphucula iimeko zokuSebenza zabasebenzi zenza ukuveliswa okutshiweyo iiglavu zithambile kwaye ziphucula ukhuphiswano lwenkampani.
Uyilo lomxholo wovavanyo lweiglavu zelatey umgca wemveliso
Umgca wemveliso uquka indawo yokulayisha, indawo yangaphambi kokumisa, indawo yokuntywila ngokuzenzekelayo, indawo yokomisa, kunye nendawo yokothula izinto ezilungiselelwe ngokulandelelana; indawo nganye ixhotyiswe ngesixhobo sedrocket drive; ikhonkco elivaliweyo lifakwe kwi-drive sprocket, isikhuseli sesandla seGlove sifakwe kwikhonkco evaliweyo; Zombini iindawo zokomisa kunye nendawo yangaphambi kokumisa inxulunyaniswe nomsinga ophezulu oshushu wegesi yomlilo oshushu, indawo yokumisa inxulunyaniswe nombhobho wokukhupha umbhobho wokukhupha igesi, kunye nomsebenzi wokuntywila ngokuzenzekelayo unxulunyaniswe negesi yokukhupha amanzi khupha. Umbhobho womoya, ukomisa umbhobho wokukhupha igesi kunye nombhobho wokukhupha irhasi wokukhupha umbhobho konke kunxibelelene nesixhobo sonyango sokucoca igesi; ikwaquka nekhabhathi yolawulo lwamanani lombane, njl.
Uvavanyo lwezonyango iiglavu zelatex zihlala zisetyenziselwa ukuvavanya indawo yomlomo yomguli okanye umphezulu wolusu, kwaye kufuneka ziqulathe isiqinisekiso sokukhusela iziyobisi seCFDA. Amandla aqine ngokugqwesileyo kunye nokumelana ne-abrasion, inokuziqhelanisa ne-asidi eyahlukeneyo kunye neendawo ezinobuthathaka ze-alkali kulusu lomntu.
Egqithileyo Uvavanyo ngokubanzi umgca wemveliso yeglavu
Okulandelayo: Umgangatho wokuPhathwa kweGlave yeZonyango
Latex isikhuseli Oomatshini
Irabha isikhuseli Machine
Utyando zilahlwe Machine
Utyando Banokubulawa isikhuseli Making Machine
Utyando Banokubulawa Latex isikhuseli Ukwenza Machine